WAASUGE IYO WARSAME: (Socdaalkii 30ka Maalmood), waxaa qoray: Dr.Xuseen Sheekh Axmed (kaddare)
Home » Qormooyinka » WAASUGE IYO WARSAME: (Socdaalkii 30ka Maalmood), waxaa qoray: Dr.Xuseen Sheekh Axmed (kaddare)	WAASUGE IYO WARSAME: (Socdaalkii 30ka Maalmood), waxaa qoray: Dr.Xuseen Sheekh Axmed (kaddare)
18/03/2017	632 Views Alle ha u naxariistee Dr.Xuseen Sheekh Axmed (Kaddare), wuxuu ka mid ahaa Qorayaashii Farta Soomaaliga. wuxuu ahaa Laashin dhaqan-ruug ah oo Suugaanta Soomaalida noocyadeeda kala geddisan curiya misana Qoraa ahaa.
Dadkii oo gabaygaa ka faalloonaya, murtidiisana wadajir u dhuuxaya, ayaa dagaal lama filaaan ihi dhex maray Wiilkii Dhaanraac iyo haweeney duq ah oo baabuurka meel dhexe kasoo raacday, fadhidayna kursi kiisa xiga. Dagaalku wuxuu ka dhashay Dhaanraac oo xabbad sigaar ah shitay, duqdiina ku tiri “ ha igu afuufin qurunka afkaaga ka socda”!. Dhaanraac asagoo intii tabartiisa ah dadaalaya ayuu af talyaani ku yiri “Scusi”-raalli ahow”.Duqdii waxay u qaadatay inuu wiilku caynayo, markaasay inta Dambiishay alaabta ku sidatay la kala baxday madaxa kala dhacday oo u celcelisay illaa gacmaha la qabto.
Haddaba, muxuu falay Dhaanraac? inta istaagay oo gacmaha shaarka laabtay, feerse la baxay ayuu yiri “ Duqda is keen”. Dadkii baabuurka saarraa oo yaab la wada qoslaya ayaa wiilkii ka bad baadshay Duqdii ayeydiis la faca ahayd, inkastoo uu murankoodii dheeraaday ilaa uu dadkii wada saameeyo . odey raggii ka mid ahaa ayaa markii dambe sheekadii soo nooleeyay si uu muranku u joogsado. Wuxuu duqu dadkii u billaabay isagoo ku luuqeynaya labadii bayd ee ugu dambeeyey gabaygii Cilmi Raage oo uu horey ugu mariyay Warsame. Baydadku waxay ahaayeen:
Sida torka iyo kaasha baa, laysu tiimbadaye
L’a tallaalanyeey see kufriga, loogu tiirsaday.
Ninkii oday ahaa markuu dadkii muranku saameeyay maskaxdooda markale ku baraarujiyay murtidii xiisa lahayd asagoo isticmaalay xeel waayeel ayuu intaa kuma dhaafine isla markiiba Waasuge ka codsaday inuu asaguna markiisa murti kale u raaciyo gabaygii Warsame tirshay. Waasuge inta dadkii isha la raacay wajiyadoodana ka gartay in hadalkiisa xiisa loo qabo, ayuu u marshay Shirib ka kooban afar beyd oo min laba lugood ah. Waasuge wuxuu yiri:
Dhulku dadkoo dhan waw dhaxeys
Dhaxalka hidde waa dhigaal
Wax noo dhimanna waa dhacaan.
Wixiisku dhiiga ways dhalaan.
Dhaanraac dhaqanka waalidkood
Dhasha ka leexataan dhahnaa.
waasuge oo damacsan inuu Shiribkiisa guurow yar raaciyo iyo Warsame oo sugi la’, niyaddana iska leh yaa markaliya hadalka ku siiya, ayaa magaalada Xamar lasoo galay.
Run ahaantii farxad gaar ahaaneed ayey leedahay imaanshaha magaalada Xamar, adigoo ka timid dibadda ama gobollada gudaha. Laakiinse, waxaa maalintaas dadka baabuurka saarraa qaarkood kala qiima badnayd Sheekadii murtida iyo xiisaha lahayd ee Waasuge iyo Warsame. Dadkii intiisii badnayd waxay baabuurka ka degeen ayagoo niyadsami u muujinaya labadii oday. Dadka oo dhan qarbaqarbe ayey baabuurka uga degeen, maxaa yeelay, waxay magaalada kusoo beegmeen maalintii bannaanbaxa loo dhigayey ayidaaddii ku dhawaaqiddii qoraalka Af soomaaliga. Dad rag iyo dumar, dhalinyaro iyo waayeel intaba leh ayaa dhabbayaasha magaalada sidii mawjadaha badda u qulqulaya.
Waasuge iyo Warsame markay baabuurkii ka degeen ayay meek gaar ah isla joogsadeen ayagoo ballamaya. Laakiin markay arkeen dadkii faraha badnaa halkudhegyada ay ku dhawaaqayaan iyo habsamida ay u socdaanna la dhaceen, ayey iskaba raaceen oo dhawr daqiiqadood la socdeen. waxay odayaashu go’aansadeen inay hubsadaan waxa meesha ka socda, sidaasna waxay ku ogaadeen sababta bannaanbaxa.
1. Kaasha: qaaddo ama (kaal) La soco Qeybta 6-aad, Berri haddii Alle idmo.
Previous: Warar dheeraad ah oo laga helayo Soomaalida lagu laayay Yemen (Daawo sawirro naxdin leh)
Next: Maxaa ka cusub guuxa siyaasadeed ee ku saabsan dhismaha xukuumadda cusub?